Save Street Children | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Save Street Children
Posted by ムラカミ on Nov 16, 2012 in Arts & Humanities, Drama, Essays.., Society & Lifestyle | 16 comments
ခုတလော အန်ကယ်ဖော ပို့စ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှု နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး အတွေးပွားစရာများ တာကနေပြီးတော့ ..
ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တပိုင်တနိုင်တိုက်ဖျက်နေတဲ့ အဖွဲ့လေး တစ်ခုအကြောင်း မိတ်ဆက်ချင်လို့ပါဗျာ…
ရွာထဲမတော့ ပန်းသီးအုံးနှောက်ဆေးခံထိထားတဲ့ ကကြောင်ဝတုတ်ဆိုလား ..သူလုပ်နေတဲ့
ဒိုဇင်ပလွတ် အဖွဲ့တော့ ရှိတယ်ဗျ.. သူတို့အဖွဲ့က ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက်
အန်ဂျီအိုတွေ- ဘကကျောင်းတွေကို စုပြီးလှူတာ ..သည်တခုကတော့ နည်းနည်း ခြားနားသဗျ…
စောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ထောက်ပံ့တာသက်သက် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်
တပတ်မှာ ၁ရက်၊ တလမှာ ၄ရက်၊ တနှစ်မှာ ၄၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ချာ့ခ်ျ တခုမှာ မနက်စာကျွေးပြီး
စာခေါ်သင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ကလေးတွေကို စာသင်ပေးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေကိုလည်း
ရံခါ သွားလှူတဲ့ အလုပ်လည်း လုပ်တယ်ဗျ)
ဆိုတော့ ဘာသာရေး မျက်မှန် တပ်မကြည့်ကြပါနဲ့လို့တော့ .. မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဗျာ။
အစောင့်ရှောက်ခံ ကလေးတွေကို ထောက်ပံ့တာထက် ပိုပြီး တကယ်ကို လမ်းဘေးတောင်းစားနေတဲ့
ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ ပညာသင်ပေး အဟာရကျွေး ပေးနေတဲ့ အလုပ်မို့လို့ပါ။
သူတို့ လုပ်နေတဲ့ နေရာကတော့ မဲဆောက်နယ်စပ် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတူ ဘာသာခြား လူမျိုးတူ လူမျိုးခြား
ခြားချင်ရာခြား မိဘမဲ့ လေလွင့် လမ်းပေါ်ရောက် နေတဲ့ (အတိတ်ကံဆိုလားဗျာ) အဲ့ဒါအကျိုးပေးမကောင်းခဲ့တဲ့
ကလေးငယ်တွေကို သည်ဘ၀ကလွတ်အောင် တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးပမ်း နေတဲ့ အဖွဲ့တခု အကြောင်း
ငွေ ၁၀၀၀ နဲ့ အ၀တ်တထည်လောက် မရပေမယ့် သနားစရာ သူတို့ ၀မ်းဝနေပါတယ်…. ။
အဖွဲ့ တည်ထောင်ရခြင်း အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လမ်းဘေးရောက်နေသော တောင်းစားနေသောမိဘမဲ့ကလေးများ ၀မ်းစာဝရေး၊
အခြေခံပညာနှင့် လေလွင့်နေသောဘ၀မှ လွတ်မြောက်အောင် တတ်စွမ်းသလောက် ကူညီဖေးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
မဲဆောက်နယ်စပ်မှာနေသော ဂါးဂါးမှ ကလေးများအား Sunday School အနေဖြင့် ကလေးများ၏မနက်စာ၊ စာသင်ကြားပေးခြင်းကို
အောက်တိုဘာလ ၇ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စပြီး တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဘေး ကလေးများ အတွက်
စာသင်ပေးနိုင်သော ဘုရားကျောင်းရှိနေခဲ့ပြီး.. ကလေးများအား ဆုံးဝသြ၀ါဒ မရှိပဲ ဘေးလွတ်ထားတာထက် အသိတရားတခုခု
ရွေချယ်ခွင့်မရခဲ့ပဲ လမ်းဘေးရောက်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်များကို တရက်တာ တောင်းစားတဲ့ဘ၀မှလွတ်မြောက်ပြီး တတ်စွမ်းသလောက်
ကူညီပေးရာတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာတစ်ခုခု ကိုတတ်ကျွမ်းစေပြီး လမ်းဘေးဘ၀မှ နေရာတနေရာစာကို
ဖန်တီးပေးလိုသော စိတ်စေတနာဖြင့် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်……..
ကလေးများအား လက်ရှိအခြေအနေအရ ရည်ရှည်စီမံကိန်းဖြင့် တပတ်လျှင် စာသင်မည့်ရက် အတွက် ၀မ်းစာဖူလုံရေးအတွက်
တယောက်လျှင် ဘတ်ငွေ ၃၀(မြန်မာငွေ-၁၀၀၀) သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ်အတိုင်း ကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက် မန်ဘာအဖြစ်
သတ်မှတ်ထားချင်ပါကြောင်း နှင့် ကောက်ခံရသော အလှူငွေများမှ ဖိနပ်၊အ၀တ်အထည်၊ အသုံးအဆောင် တချို့နှင့်
ကျမတို့ကိုယ်စီ စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြသည် မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ အလှူအတန်းတွေလုပ်မည်။ ကဗျည်းမှတ်တမ်းတွေထိုးမည်။
အမှန်စင်စစ်တော့ တာဝန်ယူ စတင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ရေစက်ပါလို့ ကျမတို့တွေ တထောင့်တနေရာကနေ
ကူညီခွင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုတချက်တည်းဖြင့် သာ ကူညီချင်သော စိတ်စေတနာပြင်းထန်သော သူငယ်ချင်းကြောင့်
ကောင်းမှုကုသိုလ် လုပ်ဖို့ မုန့်ဖိုးသာသာဖြင့် ငတ်မွတ်ဆာလောင်နေသော ဘ၀ကို ပြည့်စုံသွားအောင် တပတ်မှာ ၁ရက်၊ တလမှာ ၄ရက်၊
တနှစ်မှာ ၄၈ ရက် သူတို့မွေးမိခင်ကိုယ်စား ကျွေးမွေးစောက်ရှောက်လိုက်ကြပါစို့လား…။
ဤအဖွဲ့သည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ မည်သည့်ဘာသာရေး ကိုမျှ မရည်ရွယ်ဘဲ လမ်းဘေးကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနှင့် လက်ကမ်းမီရာ ကူညီနိုင်စေရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်….
(ဂါဂါး) Facebook- Tiger lily
KBZ ဘဏ် မြ၀တီမြို့
ဖုန်း။ ။ +၆၆၈၃၉၅၁၉၉၉၀
Email – tigerlily.tone@gmail.com
ဖုန်း။ ။ +၉၅ ၀၉ ၅၂၁၃၀၂၃
KBZ ဘဏ်-၁ တောင်ကြီးမြို့
(၃) သန်းနိုင်ဝင်း (စင်ကာပူ)
ဖုန်း- +65 8233 6482
(၄) ခင်ထက်လွင် (ဂျပန်)
(pAuKsA ) Facebook-moezattlaypyae
ဖုန်း- 080 3625 1286
***ပြည်ပရောက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ငွေလွဲအဆင်ပြေစေရန်
Ms.kay zin hlaing
Ms. KAY ZIN HLAING
A/C NO. 212-2-78178-2
မှတ်ချက်။ ။ငွေလွဲထားသည့်သူများ အက်မင်များသို့ မက်စေ့ပို့ရန်(သို့)ကွန့်မန့်ပေးထားကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
မှတ်တမ်း ဒါ့ပုံ တချို့.
You can’t buy clothing withathousand kyat but those poor ones can dine their meals with that amount of money.
The purpose of foundation of this group is to aid orphans who are begging along streets for their livelihood
We would like to support for foodstuff, basic education and also their waifs and strays lives as much as we can.
One of our member: Ga Ga who is living in Mae Sai border region will take responsibility to feed breakfast
And will teach education to those children as “Sunday School” program from October 7th 2012.
There isachurch for education of those children. Please help in your possible ways to support for the mission.
Those children had no chance to choose their lives and being waifs and strays and we would like to save their lives
by giving them certain professional skills.Currently, we have planned that cost for food at the
education day per child will be 30 Baht (~1000 Kyat).
We would like to make membership program for weekly support for these children. We also planned to support
slippers, clothing, some living materials and sweaters for them with donated money.
Each of us sometimes dreamed of making donations in reformatories and making records. However,
it is hard to start to take the responsibility for those children.
We haveachance to support them with our pocket money foraday inaweek,4days inamonth and
48 days inayear for being their step-moms and step-dads.
This group is made up of friends and is not belonging to any society or any religion but just indented to support
children of waifs and strays as much as we can.
စိတ်ပါဝင်စားပါက အဆိုပါအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း လက်တို့လိုက်ရပါသည်
ဖေ့ဘုတ်မှာ လည်း ရှယ်လိုက်ဦးမယ်။ စင်ကာပူနံပတ်က ခုထိဆက်လို့ရလောက်ပါသေးတယ်နော်။
စေတနာသုံးဒန် ပြဌာန်းပြီးလှူတဲ့ မည်သည့်အလှူမဆို မြတ်သောအလှူဖြစ်ကြောင်း။
သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ အခြေခံကျကျ လက်တွေ့ကျကျ လမ်းဘေးခလေးတွေ ကို အကျိုးပြုနေတဲ့ စေတနာရှင်များကို
ကိုယ့်ရဲ့ ဒါဇင်ပလပ်လေးကိုတောင် အနိုင်နိုင်မို့ လောလောဆယ်တော့ မဆက်သွယ်နိုင်သေးဘူးကွယ်…
မတော်လို့များ သိန်းတစ်ထောင်းငါးရာဆုကို (၁၀)ကြိမ်ဆက်တိုက်ပေါက်ခဲ့ရင်ဖြင့် နှစ်ကြိမ်စာကို ဒါဇင်ပလပ်ကိုလှူပါ့မယ်… နှစ်ကြိမ်စာကို ဒီအဖွဲ့လေးဆီလှူပါ့မယ်…
နောက်ထပ် နှစ်ကြိမ်စာကို အခမဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပေးမယ်… MCSE ကနေ CCNA အထိ အခမဲ့ပညာသင်ပေးမယ်… ငွေကြေးချို့တည့်သူများအတွက်သီးသန့်… စာမေးပွဲဖြေဆိုကြေးပါ…လှူဦးမယ်…
ကျန်တဲ့လေးကြိမ်စာကိုပဲ ကျွန်တော့မိသားစုအတွက်… နောင်ရေးအတွက်သုံးပါ့မယ်…
ဟုတ်ပါပြီဗျာ ..သိန်းတသောင်းခွဲမှာ သိန်း၆ထောင်ပဲ ကိုယ်ကျိုးသုံးမှာဆိုတော့
၆၀% ကြီးများတောင် လှူမယ့်သဘောပေါ့နော..
အဲ့အဖွဲ့လေးကိုကျုပ်က အွန်လိုင်းကနေပဲ ကူညီနိုင်တာမို့ ရှဲလိုက်တာပါဗျာ…
ငွေကြေးပိုင်း ပြင်ဆင်မှုပိုင်း ၀ယ်ခြမ်းရေးပိုင်း ချက်ပြုတ်ရေး သင်ကြားရေး
အကုန်လုံး နိုင်နင်းစွာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲကြတာတွေ့ရတော့လေးစားမိကြောင်းရယ်ပါ…
ဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာလေးတွေ ကူးထားလိုက်ပါတယ်…။
သူတို့ လက်လှမ်းမီသလောက် လေးကို
တာဝန်ယူပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်တာကို အရမ်း သဘောကျမိလို့
ကျနော် ပူးပေါင်း ဖြစ်နေတာပါဗျ.
ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးပဲ။
လုပ်ချင်စိတ်ရှိတာ၊ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာ၊ လုပ်တတ်တာတွေဟာ အားကျအတုယူစရာကောင်းပါတယ်။ :hee:
အရင်ကတော့ ကိုယ့်လက်တကမ်းမှာ မြင်တွေ့နေရတာတွေကို လူ့ဘောင်အကျိုးပြုလို့ သဘောထားပြီး ပိုစ့်တွေရေးတင်ထားခဲ့မိတာကို သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ အပြောချည်းပဲ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားရပြီး စာရေးချင်စိတ် ပျောက်သွားတယ်။ :eee:
သူတို့ အတွေးလေးက အတော်လှတယ်
၁နှစ်လောက် လုပ်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေလည်း စာသင်ချိန် တနေ့၂နာရီနဲ့ နာရီတရာဝန်းကျင်မို့
အခြေခံ ကျွမ်းကျင် မှုအဆင့်လောက်ရှိတဲ့ လက်မှုပညာ တခုခု တတ်သွားမှာပါ
တပါတ်တခါ အငှားမိခင် လုပ်တာပါတဲ့
အရီးနေတဲ့အရပ်မှာတော့ မိဘဆင်းရဲလို့ဖြစ်စေ၊ မိဘမဲ့လို့ဖြစ်စေ စာမသင်နိုင်တဲ့ ကလေး ဆိုတာမရှိပါဘူး။
မိဘမဲ့ ဂေဟာတွေက မိဘမဲ့ကလေးတွေ အတွက် တာဝန်ရှိယူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခြေသားလုံးအိမ်တိုင် ခေါ်မလား အိမ်ခြေမဲ့သူတွေ (Homeless People) ရှိကြတယ်။
အများစုက မူးယစ် ဆေးစွဲသူတွေ နဲ့ စိတ်မမှန်သူတွေပါ။
အဲဒါကို Church တွေက တစ်ပါတ်လုံး အလှည့် နဲ့ ညနေစာ ကျွေးပြီး တရားဟောပေးတယ်။
အဲဒီလူတွေက တစ်ချို့က ရသမျှပိုက်ဆံ ဆေးသုံးပစ်တာ၊ တစ်ချို့က စိတ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်တာ။
ဒီတော့ အဲဒီ ညနေစာဘဲ အဟာရ အဖြစ်စားကြရတယ် ပြောတာဘဲ။
ညစာ ဆိုတာက Sandwiches ၊ ဘီစကစ်၊ အာလူးကြော်၊ စွပ်ပြုတ်၊ ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည်ပေါ့။
အရီး က အဲဒီလို လုပ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှာ အဂါင်္နေ့တိုင်း အဲဒီလူတွေအတွက် Sandwiches လုပ်ပေးတဲ့ လုပ်အား ကူပါတယ်။
၂နာရီလောက် အချိန်ပေးပြီး လုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်အားလှူပေးတာ ၅နှစ် နီးပါးရှိပြီ။
သူတို့ မှာလဲ ရံပုံငွေ လိုတာပါဘဲ။
မြန်မာပြည်မှာ အရက်သမား၊ ဆေးသမား ဆို လူတွေ ဝေးဝေးရှောင်တယ်။
တော်ရုံလဲ အရေးလုပ်ပြီး သူတို့ ကို အရက်ဖြတ်၊ ဆေးဖြတ်ဖို့မကူညီ ပေးလိုကြဘူး။
ဒီမှာတော့ အစာကျွေးပြီး တစ်ယောက်ပြတ်ပြတ် နှစ်ယောက်ပြတ်ပြတ် စည်းရုံးတယ်။
သူတို့ကို အဲလို ဘဝက လွတ်အောင် ဆုတောင်းပေးတယ်။
အဲဒီဘဝက နေ လွတ်ရင် အလုပ်ရှာလို့ရအောင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေ သင်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းတယ်။
ဟုတ်တယ် အရီး. သဂျီးမိန့်လေ့ရှိတဲ့ ငါ့လက်ကလွတ် ဗြွတ် အလှူမျိုး မဖြစ်ဘဲ
ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သတ်ကြိုးပမ်းတဲ့ အလှူမျိုးတွေ ကျနော်တို့ပိုလိုနေတာပါ
ကိုကြောင်ဝတုတ်တို့ မှတ်တမ်းပုံထဲမှာပါတဲ့ စေသနာဆရာမလေး လို ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေ ကအစ
ကိုကျော်သူလို လူတွေအဆုံး. တကယ်ကို အများကြီးလိုနေတာပါ
ဒီကလေးတွေ ကို ကူဖို့ဆိုတာထက် ကယ်ဖို့. နည်းလမ်း လိုနေတာပါ
သူတို့ချာ့ခ်ျ ကတော့ လက်လှမ်းမီသလောက် လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ.
တချို့တလေ. အလကားပါကွာ သူတို့ခရိယာန် တွေ ဘာသာပျံ့ပွားဖို့
မားကတ္တင်း သက်သက်ပါ လို့ ယူဆကြမှာ စိုးလို့ပါ
တကယ်တမ်း စာသင်ပေးနေတဲ့ မလီလီ ကလွဲရင်ကျန်တဲ့လူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ
သည်ကလေးတွေကို ချာ့ခ်ျက စာခေါ်သင်ပေးလို့ ထမင်းကျွေးလို့
ဗေုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ လမ်းပေါ်က အပေအတေ ကြုံရင်နှိုက်တဲ့ ချာတိတ်တယောက် ဖြစ်လာမှာထက်
ခရိယာန် ဘာသာဝင် လက်မှုလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားငယ်တယောက် ဖြစ်လာမှာက
လောကကို ပိုအကျိုးပြုမယ် ယူဆပါတယ်.
ဘက ကျောင်းတွေ လှူတာတွေရော. တွဲလုပ်နေတဲ့အတွက်.
ဘာသာရေးဆိုတဲ့ အစွန်းအောက်က လွတ်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်ဗျာ.
ကျနော်လည်း အွန်လိုင်းကနေ ကူနိုင်သလောက် ကူပေးတဲ့သဘောပါ
P.S အဖွဲ့ ဒစ်စ်ခွစ်ရှင်း ဘိုလိုက ဟောသည့် မိဂီ မီးကြိုးမောင်းပျက်ရေးပေးထားတာခည.
လွဲတာ ချော်တာလေးတွေ ကူပြင်ပေးပါအုံး. ရွာသူားတွေခညား
ဂါးဂါး တို့က သည်အတိုင်း တင်ထားလို့. အမှားပါရင် သများအရှက်သည်းရမှာမို့
လူသားချင်းရိုင်းပင်း ကူညီတာ၊စိတ် စေတနာက အဓိကပါပဲလို့မြင်မိတယ်…။ဘာသာဆိုတာက ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ရောက်သွားတာပါ။
တကယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကို မိမိရဲ့အားလပ်အနား ယူရမယ့်အချိန်ကို ဖဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ကြတာကိုတွေ့ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်…။
poorly donated (ညံ့ဖျင်းစွာလှူဒါန်းခြင်း) ကို ဂီ ဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိ။ မပြုံးကတော့ လှူတာထက် စံနစ်ပြောင်းတာကိုပဲ ကြိုက်တယ်။ ဥပမာ မြန်မာပြည်မှာ မွေးစားခြင်းဥပဒေ ကို နည်းနည်းပြောင်းသင့်တယ် မထင်ဘူးလား။ လှူတဲ့နေရာမှာ ၀န်နဲ့အားနဲ့ မျှဖို့ဆိုတာ စိတ်မောစရာကြီးပါ။ မွေးစားခြင်းဥပဒေကို နည်းနည်းလျှော့ပေးရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ။ ဥပမာ သားရင်းသမီးရင်းနဲ့ တန်းတူ အမွေ ဆိုတာမျိုး။ ဒါမျိုးက ပြောတော့ကောင်းတယ်။ တကယ်ပေးရမယ့် မိဘအနေနဲ့ကတော့ မလွယ်။ တခြားစည်းကမ်းတွေလည်း အင်မတန် တင်းကျပ်တယ်။ ဒီကိစ္စကိုကြောက်လို့သာပဲ ကလေး မမွေးစားတဲ့လူတွေများခဲ့တာ။ ဒါကို အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကျယ်ပြန့်စွာ ကိုင်တွယ်သင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလား ဂီရေ။ ဂီက ဥာဏ်ကောင်းလို့ မေးတာနော။
ကျနော်တို့တွေလည်း ဥပုသ်နေ့ဗော်လန်တီယာ ဆိုပြီး သည်လိုကလေးတွေကို
တပါတ်မှာတရက် စာသင်ပေးပြီး ထမင်းကျွေးတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတွေ
လုပ်နိုင်ရင် ဆိုတာမျိုးလေး တွေးမိကြောင်းပါဗျာ.
မွေးစားတဲ့ကိစ္စကိုပြောရင် အမွေကိစ္စက စကိုင်တွယ်ရမယ်လို့
ကျနော့်မှာ ရေးပြီးမှ မတင်ရဲခဲ့တဲ့ ပိုစ့်တပုဒ်ရှိဖူးတယ်
အိမ်ထောင် ဆက်များခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးပိုင်းမှာအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်
ကြည့်ပါအုံးဗျာ တသက်လုံးကိုယ်ရှာလာတဲ့ ပစ္စည်း ဥစ္စာကိုကိုယ်
စီမံခန့်ခွဲခွင့် မရှိဘူး. (အမွေကြိုခွဲထားရင်တော့ တမျိုးပေါ့လေ)
သူသိနေတယ်. ကျန်ရစ်သူတွေ တရားတဘောင် ဖြစ်မှာ
သူသိနေတယ် တရားမမှုနဲ့ နှစ်ပေါက်အောင် တိုင်ပါတ်ကြမှာ
သူသိနေတယ် အမျိုးအရင်းတွေ တုတ်တပြတ် ဒါးတပြတ် ဖြစ်မှာ
သူသိနေပြန်တယ်. ဖွတ်လျှောလိပရှောနဲ့ ထိုးရောင်းပြီး ထုခွဲ ဝေပုံကျ ယူကြမှာ
ရှင်းပါတယ် ကျနော်တို့ ဓလေ့ဆိုလား. အဲ့ဒါကြီး အခြေပြုပြီးရေးထားတဲ့
ဥပဒေအရ သေတမ်းစာ ကိုခွင့်မပြုထားလို့ ပါပဲ
သားသမီး ၇ယောက်ရှိ ၇နဲ့စား. ၈ယောက်ရှိ ၈နဲ့စား.
ခက်ပါ့ကွယ်. ကွန်မြူနစ် စနစ်နဲ့တောင်တူသေး.
အဟေးဟေး နွားထီး တကျပ်နွားမတကျပ်
အရာရှိကြီး တယောက်နဲ့ ညားလို့ကြီးပွားသွားတဲ့ သမီးကြီး လည်း တကျပ်
လူပျိုကြီးအဖြစ် အဖေ့လုပိငန်းကို တသက်လုံးကူလုပ်လာတဲ့ သားကြီးလည်း တကျပ်
ကလေကချေနဲ့ လိုက်ပြေးလို့ မွဲတေနေတဲ့ သမီးငယ်လည်း တကျပ်
ကျောင်းတက်ရင်း သုံးဖြုံးနေတဲ့ သားငယ်လည်း တကျပ်.
သာတူညီမျှဆိုတာထက် လိုတဲ့နေရာမှာ လိုသလောက် ပေးနိုင်ဖို့
ကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရဘဲ. ကိုယ်သေတဲ့နောက်မှာ ချစားနေတဲ့
ဟိုတိုင်လုံးကြီးကဆြာတွေက ကိုင်တွယ်မယ် ဆိုတာကတော့ အင်းးးး
အဲ့ဒါကြီး အခရာကျနေတယ် ထင်မိပါကြောင်း.
ကြားဖူးတာတော့ သွားလေသူ ရုပ်ရှင် မင်းသားဝင်းဦးက သူမသေခင်မှာ သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သူပေးချင်တဲ့သူကို ပေးလို့ရအောင် ( သေတမ်းစား တရားဝင်ရေးလို့ရအောင် ) ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ပြောင်းသွားခဲ့တာလို့ ကြားဖူးတယ် ။ အဲ့ဒါ တကယ်ဟုတ်လားတော့မသိဘူး။
ရသွားသူက သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ အမျိုး သမီးတယောက်ထင်တယ်။ နာမည်ပါးစပ်ဖျားတင်မေ့နေလို့ ။
နီးစပ်ရာများလည်း လက်တို့ထားပါတယ်။ အိမ်မှာ ပုံမှန်ပိုက်ဆံလတိုင်း လာကောက်တဲ့ အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့တော့ ရှိတယ် ။ သူတို့လည်း တော်တော်လေး ကို လုပ်ပေးကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပုံထဲက မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ပေါ်က ပန်းရောင်က ဘာမုန့်လည်း မသိဘူး အကြော်လည်းပါတယ်။
သေတမ်းစာမှာ ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက် ပါသွားလို့ သေတမ်းစာလို့ ပြင်ဖတ်ပေးပါ။